MDC Inotora Dare reParamende Musarudzo
Kubvumbi 02, 2008
MDC inotungamirirwa naVaMorgan Tsvangirai yatora dare reparamende neChitatu zvichitevera kukunda kwayakaita musarudzo dzekutsvaga vamiriri veHouse of Assembly. Sangnao reZESN rinoti MDC yaVaTsvangirai yava nezvigaro makumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe, ukuwo Zanu PF yatora zvigaro makumi mapfumbamwe nezvitanhatu. MDC inotungamirwa naVaMutambara yatora zvigaro gumi nechimwe. Mumiriri weTsholotsho, Professor Jonathan Moyo, vapinda muparamende vakazvimirira.
MDC inotizve VaTsvagirai ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika, uye hazvitomboda kuti paitwe dzimwe sarudzo kana kuti run-off sezvave kunyorwa mumapepa nhau. Sekutaura kuri kuita Irwin Chifera, MDC inoti VaTsvangirai vakunda musarudzo iyi ne 50,3 per cent.
Ukuwo hurumende inenge isisazive kuti yoti kudii. Mutevedzeri wevaimbove gurukota rezvekuburitswa kwemashoko, VaBright Matonga, vanoti MDC iri kurota.
Munyori mukuru mubazi reezvekuburitswa kwemashoko, VaGeorge Charamba, vanoti VaTsvangirai nevamwe vavo vari kuzvisikira moto muziso uye vachaona zvekuita navo.
Asi vaimbove gurukota rezvekuburitswa kwemashoko, VaSikhanyiso Ndlovu, pamwe nevamibove gurukota rezve mukati menyika, VaKembo Mohadi, vaudza Studio 7 kuti hurumende haineyi nemashoko aya, uye ZEC ndiyo inofanira kutora matanho, kana paine matanho ainoda kutorera MDC.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika VaRejoice Gwenya vaudza mutori wenhau Blessing Zulu kuti zviri kuitwa neMDC nevamwe vakuru vehurumende hazvina maturo ose.